Xildhibaan Mahad Salaad “Gabar Saqiir ah inla kufsado, la dilo, waa wax islaamnimada iyo dhaqankeena suuban ka baxsan” – Kalfadhi
Waxaa isa soo taraya dadka ka hadlaya Falkii xanuunka badnaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug, kaas oo ahaa Kufsi iyo dil loo geestay Gabar yar oo 12 sano jir ah taas oo meydkeeda oo Jawaan ku jira la soo dhigay meel u dhow gurigeeda kadib 24 saac oo baadi goob loogu jiray Gabadha oo Jimcihii Gaari lagu Afduubtay.
Xildhibaan Mahad Salaad oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintaan ka hadlay waxa uuna uu sheegay in caro xag Alle ka timaada ay ka dhalan karto hadii aan wax laga qaban musiibadii ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu kaga hadlay arintaan waxa uuna maamulada magaalada Gaalkacyo ka dalbaday in ay cadaaladda horkeenaan dhalinyaradii ka dambeysay Kufsiga magaalada.
“Saqiir 12 sano jira, inla kufsado, kadibna xubnaha jirkeeda la jarjaro, hadana meydkeeda inta jawaan lagu soo rido gurigii ay daganeed albaabkiisa lasoo dhigo waa wax islaamnimada iyo dhaqankeena suubanba ka baxsan. Bini Adamna iska dhaafe xitaa xayawaanka aysan ka suuroobin”, ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad oo katirsan Golaha Shacabka ee BFS.
“Hadii aan wax laga qaban kuwii falkaan ku kacay waa hubaal in caro xag Rabi ka timid innagu wada dhici doonto. Caradaas oo saqiir iyo kabiir, mu’min iyo munaafaq, dulmane iyo daalim, midkii dhibka geystay iyo kan aan wali maqal aan kala saari doonin” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Mahad Salaad oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Mahad Salaad ayaa ka dalbaday Shacabka magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan sidii loo soo qaban lahaa dadkii falkaasi fuliyay, hadii aan laga hortagin falalka nuucaan oo kale ah ayuu sheegay in degaanka oo dhan ay saameyn karto ayna sii socon doonaan sida uu hadalka u sheegay Mahad Salaad.
“Soomaaliyey, reer Gaalkacyow Ilaahii idin abuuray ka baqa oo u cadaalad fala saqiirta silica iyo saxariirta loo dilay”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhiaan Mahad Salaad. Xildhibaan Mahad ayaa u tacsiyeeyay qoyskii dhibaan loo geestay waxa uuna balan qaaday in uu ka shaqeyn doono sidii loogu cadaalad fali lahaa. “Alle Samir iyo iimaan haka siiyo eheladii iyo asxaabtii ay ka shahiiday Caa’isho”, ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Xilhibaan Mahad Salaad oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Dad badan ayaa arintaan ka hadlay waxayna dhamaantood ku tilmaamay arin ugub ku ah Soomaaliya, hadii aan laga hortaginna ay keeni karto musiibo wayn oo ka dhacda umadda Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya iyo Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa loogu baaqay in ay ka qayb qaataan daganaan-shiyaha magaalada Gaalkacyo oo ay ku so batayn kufsiga iyo dilalka ka dhacay magaalada labadeeda dhinac ee Waqooyiga iyo Koonfurta ee Maamulada Puntland iyo Galmudug.